“Waxaan aamminsanahay hadday doorashadaasi si wanaagsan u dhici waydo inaynu kala guuri” Prof. Axmed Ismaaciil Samatar | Haatuf Media Network
“Waxaan aamminsanahay hadday doorashadaasi si wanaagsan u dhici waydo inaynu kala guuri” Prof. Axmed Ismaaciil Samatar
August 10, 2015 - Written by Admin Two
“Dad Baa La Leeyey Meel Baa La Gaynayaa Oo Loo Magacaabayaa Inuu Wakiil Uga Noqdo Somaliland, bronchi Waxa Weeye Su’aashu Derajada Lagu Soo Xulay Maxay Tahay? Sababta Qofkan Lagu Soo Soocay Maxay Tahay?.. Shaqadii Xamar Ayey Taasi Noqonaysaa. Xaajiga Adeerkii, rx Macooydii, medic Walaalkeed, Habaryarteed, Soddohdii Iyo Wax Caynkaas Ah Bay Noqonaysaa!..”Prof Axmed Ismaaciil Samatar
Hargeysa, August 10, 2015 (Haatuf) – Prof. Axmed Ismaaciil Samatar, ayaa markii u http://designbridge.org/wp/viagra-effects horreysay qaawiyey Siyaasadda arrimaha dibedda Somaliland oo uu ku tilmaamay mid aan lahayn istaraatijiyad lagu hago oo ka dambaysa ama caalamka wax lagaga dhaadhicin karaa. Isla markaana, waxa uu sheegay in Somaliland lagu qiimaynayo sida ay uga gudubto doorashooyinka soo socda oo xusay in nidaamkii ay ku fiicanaayeen laga duway.
Prof: Samatar, waxa uu sheegay doorashooyinka Madaxtooyada iyo Golaha Wakiillada ee weli wakhtigooda rasmiga ah ee la order levitra pill'>order levitra pill qabanayaa heehaabka ku jiro, khilaafkuna ka taagan yahay, haddii si xun loo galo inay dumin karaan 24 sano iyo dheeraad wixii la soo dhisayey, haddii si wacan loo galana sahli karaan in Qarankani yeesho baalal uu ku duulo oo dunida uu ku gaadho, sidoo kalena caddayn doonto doorashadaasi bisaylka Ummadda iyo Siyaasiyiinta Somaliland.
Waxa uu Axmed Ismaaciil Samatar ku dooday in ay jiraan wax qaldamay markii gooni-isu-taagga Somaliland lagaga dhawaaqay magaalada Burco 18-kii May sannadkii 1991-kii, waxaanu sidaa ku sheegay mar uu shalay khudbad ka jeediyey Madal dad badani ku kulmay oo arrimahaas lagu falanqeeyey. Sidoo kale, waxa uu dhalliilay nidaamka 25-sano ku dhawaadka ay Somaliland jirtay lagu dhaqmayey waxyaabo ka mid ah oo qabyaaladda iyo qof jeclaysigu ku jiraan iyo nidaamka istaraatijiyadda oo aan generic levitra illaa hadda dejisnayn sida uu sheegay. Sidaa awgeed, waxa uu tilmaamay in la iska jeedo, Shacabkuna ku xidhan yihiin Dayr Somaliland la yidhaahdo oo albaabbadiisu qufulan yihiin sida uu hadalka u dhigay maaddaama oo aanu muuqan hadaf-siyaasadeed cad oo Somaliland u dejisan oo bulshadu fahansan tahay.
“Waxa taallaa waa Siyaasaddii arrimaha dibedda Somaliland, sidee midho looga dhaliyaa Adduunyadii kale? Anigu waxan idhi 25 sannadood oo habsan ah ayaa la marayaa, maalintii Burco laga yidhi; ‘waannu dhaqaaqnay’ waxay ahayd in laga fikiro oo Guddi loo saaro markiiba ka soo shaqaysa sida Adduunyada loo galayo. Illaa maanta 25 sannadood bay ku dhawdahay, illaa maanta ma hayno istaraataji adduunyada lagaga midha-dhaliyo.” Sidaa ayuu yidhi Prof: Samatar.
Axmed Ismaaciil Samatar waxa uu sheegay in uu Madaxda Somaliland weydiiyo hadaf-siyaasadeedka dalka, waxaanu yidhi; “Anigu Madaxdeenna waxaan ku idhaahdaa istaraatajigi aaway, geb-geb ma jiro. Nin baa halkan Wefti u tegayoo, Wasiir baa halkan soo arkayoo, wax caynkaas ah! Dadkina way xidhan yihiin oo Xero weyn bay ku jiraan oo Somaliland la yidhaahdo, albaabbadina way qufulan yihiin! Dee intay sugi? Marka dambe iyagii baa muraaraddillaacaya, markaa waxay ku noqonayaan waar meeshan waxba ma jiraane waa la inna hodayaa oo qofba meel ka baxo ayey noqonaysaa.”
“Markaa, istaraataji dhab ah oo arrimaha Adduunyada laga keeno midho oo lagu garto Somaliland inay tahay waddan jira shaqadeedii mabaynaan bilaabin. Dad baa la leeyey meel baa la gaynayaa oo loo magacaabayaa inuu Wakiil uga noqdo Somaliland, waxa weeye su’aashu derajada lagu soo xulay maxay tahay? Sababta qofkan lagu soo soocay maxay tahay? Waad garanaysaane is-weydiiya, Shaqadii Xamar ayey taasi noqonaysaa. Xaajiga Adeerkii, Macoowdii, Walaalkeed, Habaryarteed, Soddohdii iyo wax caynkaas ah bay noqonaysaa!.” Sidaa ayuu yidhi Prof: Axmed.
Axmed Ismaaciil Samatar oo sii watay hadalkiisa, waxa uu yidhi; “Markaa, dadka intiisa badani way ku laab-dillaaci taas, hadday laab-dillaacaana cudur kale ayaa ka sii dambeeya haddaanu hore u bi’in. kolkaa shaqadaas mabaynaan bilaabin, waxaynu samaynaana inteeda badan waxay u dhadhantaa sidii waxaynu ka sii ordaynay ee lagu dhaqmi jiray, markaa haddaynu doonayno wax kale waa inaynu ka duwanaannaa.”
Prof: Samatar oo ka hadlayey waxa lagu garanayo inay Somaliland dhab ka tahay waxay diidaysay iyo waxay doonaysaa waxa lagu garanayo, waxa uu yidhi; “Halka ugu horreysa ee lagu garanayo inay innaga dhab tahay arrimahaas in la fahmay oo wax laga qabanayo ugu horreysaa way inna hor-taallaa maanta. Waxa weeye doorashooyinkaa soo socda, furuhu waa doorashooyinkaas. Doorashooyinkaas soo socda waxa immika la cialis professional 100 mg'>cialis professional 100 mg leeyahay December 15-keeda 2016-ka.”
Sidoo kale, Prof: Samatar oo ka sii hadlaya arrintaa doorashooyinka Somaliland waxa uu yidhi; “Saaka (shalay subax) waxa la ii sheegayey warar la iila yimi waxa la leeyahay; ‘Mayee weli Madaxweynihii iyo Guurtida qofkii Madaxda u ahaa iyo waxaasaa weliyoo, qoladii Guurtiduna waxay leeyihiin sidaas maaha oo, waxaasaa weli lagu jiraa!. Waar dee waddanka ma intan baa leh wax isku shushubanaysa mise ummaddaa ballaadhan baa leh?”
“Waxay ahayd maalintii Madaxweynaha la doortay in si dhakhso ah haddii lagu doorto haddaad fahamsan tahay inaad u very good site best online cialis bilawdo shaqada sidii laguu beddeli lahaa wakhtigaagu markuu dhammaado. Lixda bilood ee ugu horreeya Madaxweynaha waa inay Miiska taallaa ummadduna ay ogtahay. Waa loo kordhiyey iyo waxanaa, kuwanaa sidaa yidhi iyo kuwii kale ayaa sidaa yidhi iyo wax caynkaasa looma baahna. Maraykanka waannu ognahay, waa la ogyahay doorashadu inay dhacayso maalinta Salaasada ah ee bisha December ugu horreysa ayaannu galnaa doorashada, cid waa loo kordhiyey iyo balaabalaa waxaasi ma jirto.” Sidaa ayuu yidhi Axmed Ismaaciil Samatar.
Waxaanu intaas ku sii ladhay; “Doorashadaasi soo socotaa waxay markhaati ka noqonaysaa Somaliland dadkeedii iyo Madaxdeedi inay bislaadeen bay markhaati ka noqonaysaa. Anigu waxaan aamminsanahay doorashadaasi hadday si wanaagsan u dhici waydo inaynu kala guuri baan ka baqanayaa ciyaar ciyaar maaha. Waxa la soo gaadhay laba-abbudh, dhawr iyo labaatankaa sannadood wixii la soo waday intuu Baalal yeesho in la duulo iyo inta baadadku innaga go’aan wixii yaraana ay kala daataan.”
Prof: Samatar waxa uu sharraxaad ka bixiyey soddex qodob oo uu sheegay haddii doorashada laga waayo inay Somaliland qiimo-dhac iyo burbur ku keeni karto, haddii laga helana dunida gaadhsiin kara, waxaanu yidhi; “Saddex ammuurood baa markaa u ah halbawle doorashadaasi siday u dhacayso, ta ugu horreysaa waxa weeye nashqadda doorashadaas sida loo maamulayo farsamo ahaan si ay u noqoto mid cad oo dunidu arkayso iyo maalinta doorashadu dhacdo sida loo tirinayo inay caddahay oo aan lagu joogjoogsan oo musuqmaasuq iman, way dhici meel-meel yar, laakiin Somaliland inta badan waa inay caddaan noqotaa doorashadu.”
Axmed Ismaaciil Samatar oo sii sharraxaya qodobbadaas doorashadu ku hagaagi karto haddii la helo, haddii la waayana xumayn karaa, waxa uu yidhi; “Halkaa dabadeed doorashadu markay dhammaato waa inuu ka soo baxaa hoggaan cusub, hoggaankuna qof uun maaha ee waa Koox, qof ha hoggaamiyo, laakiin waa Koox, markaa waa in hoggaan cusubi ka soo baxaa, oo waxaa badan ee la qabtay oo dawladdan immika joogtaa waxa badan ee ay qabatay halkaas ka sii qaada, waa in hoggaan tayo lihi halkaas ka soo baxaa, haddii kale baadadkaa innaga qoyaya, haddaanay go’in.”
“Ta saddexaadna waxa weeye in kor loo soo qaado dadkaa cusub ee soo baxaya, waa inay noqdaan dad karti u leh, taariikhdoodana ay ku jirto inay kor u qaadaan heerka dawlad lagu dhiso ee lagu wado in kor loo soo qaado. Markaa, doorashooyinkaasi waxay yihiin Maftaaxii Albaabka mustaqbalku hadduu xidhmo oo musuqmaasuq iyo reer hebel baa halkan ku shiraya ay gasho waxaa aynu soo wadnay oo dhami wuu dumi, haddii albaabkaas si wanaagsan looga baxana anigu waxaan qabaa Somaliland inay galayso ajande cusub, leefal cusub iyo karti cusub oo hawlaha innaga maqan ee adduunyada innaga maqanna wax lagaga qaban karo, waddanka gudihiisa dhismihiisuna uu tallaabooyin cusub qaadi doono.” Sidaa ayuu yidhi Prof: Axmed Ismaaciil Samatar. Source:Himilo.